Eeirtiraa: Godaantoonni doonii dhidhimteerraa lubbuun hafan maal jedhu? - BBC News Afaan Oromoo
Eeirtiraa: Godaantoonni doonii dhidhimteerraa lubbuun hafan maal jedhu?
Image copyright Bokuretsihon Tsegeze'aab
Doonii caccabdee galaana qarqara Liibiyaatti argamu keessatti dhidhite keessaa lammileen Eertiraa lama lubbuun hafan.
Dargaggoonni kunneen lamaan mudannoo isaanirra gahe yoo yaadatan sammuu isaanii akka malee dhipphisa.
Baatii Adooleessaa keessa dooniin godaantota 300 qabattee turte tokko keessaa namoonni 115 ta'an du'an. Bokuratsihon Tsagazeab fi Bakrii Mohaammad yeroo ammaa miidhaa irra gaheef hospitaala magaalaa Tiriipooliitti wallaansa argachuu jiru.
Liibiyaatti godaantotni doonii keessaa 'hin buunu' jedhan
Israa'el godaantota biyyaa baasuuf karoora qabdu haqxe
Gidiraa hamaa keessa darban irraa dandamachaa yeroo jiran kanatti, wayita bidiruu mukaa sana yaabuuf murteessan akka abdii kutataniifi gaaffii itti ta'e dubbatu.
Waggoota lamaan darbaniif wiirtuu hidhaa Kihooms jedhamu keessa turan. Bakki kunis magaalaa Tiriipooliirraa gara bahaatti fageenya kiiloomeetira 120 irrratti kan argamtu yoo ta'u, achi keessattis ukkaamamuun ifa aduu muraasa qofaan jiraatan.
"Jireenya fokkisaa waggoota lamaaf dabarsine sana jalaa ba'uuf ture kan doonii sana seenne," jedha Bokuretsihon.
Dargaggoonni lameenuu warra seeraan ala namoota dadabarsaniif maallaqa kennuusaanii dubbataniiru, garuu hangam akka ta'e hin himne.
Warreen seeraan ala namoota daddabarsanis, dooniin isaan ittiin galaana Mditiraaniyaan qaxxaamufuuf jedhan kan sadarkaa gaariirratti argamtu ta'usaa itti himanii turan. Kan isaan doonittiidhaan imala jalqaban ammoo baatii Adoolessa keessa halkan naannoo saatii 23:00 irratti ture jedhu.
Garuu erga saatii sadiif deemanii ture kan bishaan suut suutaan doonittii keessa seenuu jalqabee, boodarra cabsee guute.
"Baaldiitti fayyadamuun bishaan keessaa baasuuf yaallee ture. Garuu, bishaan saffisaan guutummaatti nu liqimse," jedha Bokuretsihon.
Wayita isaan bishaaniin liqifmananii gargaarsaaf iyyaa turanittis dooniin warra daldaltootaa tokko calisuun bira akka tarte dubbata dargaggoon kun.
Isaan boodas dooniin isaanii bishaaniin liqimfamu eegalte, kanaafu namoonni doonittii keessa turan hundi uttaaluun galaana keessa seenan.
Goodayyaa suuraa "Waaqayyo qofaatu akkan oolu waan barbaadeef na oolche malee ani bishaan daakuullee hin baranne."
Namni jaakeeta ittiin lubbuu ofii baraarfatan qaban tokkollee waan hin turreef hunduu bishaan keessatti kan qabatan wallaalan.
Bokuretsihon jalqama jarkaanii cabduu xiqqoo tokkon dura butadhe jedha. Akka warra kaaniin bishaanitti hin darbatamnettis gara cabaa mukaa bishaanirra bololi'aa jiruu tokkottan siqe. Muka cabaa sanarras halkan guutuu qabatee bule.
"Waaqayyo qofaatu akkan oolu waan barbaadeef na oolche malee ani bishaan daakuullee hin baranne."
Bakiriin ammoo osoo gargaarsi isaaniif hin dhufiin saatii toorba dabarsan keessa maaltu akka ta'e yaadachuu hin danda'u jedha.
Akka carraa ta'ee namoota qurxummuu qaban darbaa jiraniin bararamanii buufata poolisii Tiriipoolii keessa jiru tokkotti kennaman.
Yeroo sanatti wallaansa fayyaa atattamaa isaan barbaachisa ture sababiin isaas hundi isaanii bishaan garaatti naqamaa turerraan kan ka'e ofirratti didigaa turan.
Erga dooniin caccabdee liqimfamtee namoonni keessa turan walakkaa ol galaana keessatti dhumanii amma baatii tokko guuteera. Warra gidiraa gaafa sanaa keessaa lubbuun hafan garuu hanga ammaa sammuun dhiphachuu hamaa keessa jiru. Fuuldura isaaniillee maal akka ta'e hin beekan.
UN warra nama godaansisan adabuuf
"Erga gaafa sanaatii hirriba gaarii rafee hin beeku. Fuullu hiriyyoota koofi namoota waliin imalaa turree abjuudhaan natti dhufa," jedha Bokuretsihon.
"Waa'ee jireenya koollee nan yaadda'a. Maaltuu na mudata laata? Maal akka hojjennus hin beeknu."
Godaantotni lubbuun baraaraman doonii gara Liibiyaatti deebisuuf jettu keessaa bu'uu didan
Israa'el godaantota Afriikaa biyyaa baasuuf karoora qabdu haqxe
Godaansa seeraan alaa: Godaantotni Itoophiyaa mana murtii Keeniyaatti dhiyaatan